Omenala ndị America | Akụkọ njem
Mariela Carril | | Atụmatụ, United States
America bụ nnukwu kọntinent dị iche iche nke ụmụ amaala na ndị kwabatara, ma na ugwu ma na etiti yana ndịda. Ma nke bụ eziokwu United States bụrụ otu n'ime ike ụwa, o meela "omenala ndị Amerịka" na omenala obodo a ọ bụghị nke kọntinent.
Mkparịta ụka dị iche, taa anyị ga -elekwasị anya na Omenala ndị America na ihe niile onye njem ma ọ bụ onye mbịambịa kwesịrị ịma tupu ịga.
2 Ndị njem na ndị mbịarambịa
Ọ bụ Ọchịchị gọọmenti etiti nke mejupụtara Steeti 50 na mpaghara gọọmentị etitiO nwere oke osimiri n'akụkụ Atlantic na Pacific na ókèala Canada n'akụkụ ugwu na Mexico na ndịda. Na mgbakwunye, enwere agwaetiti mara mma nke Hawaii na ma na Pacific na Caribbean nwere ụfọdụ ókèala na -edeghị akwụkwọ.
United States nwere obere karịa Kilomita 9.80 nde na ọnụ ọgụgụ ndị mmadụ dị nde mmadụ 331. Ndị bi na ya dị iche iche, nke sitere na ite na -agbaze nke mbata na ọpụpụ butere kemgbe ọ bụ obodo ndị Europe. Ọdachi nke ụmụ amaala bụ otu ihe ahụ na ndị America ndị ọzọ, mmeri, iwepụ ala ha na ọnwụ n'aka ọrịa sitere Europe.
Ndị njem na ndị mbịarambịa
Ibi na mpụga obodo gị ga -abụrịrị ihe ịma aka yana n'otu oge ahụ ahụmịhe mmụta dị ukwuu. Ihe kacha mma bụ ịmara ọdịbendị tupu oge eruo, gụọ, banye n'ime, mepee isi gị ịnabata ndịiche.
Mgbe anyị na-ekwu maka Omenala ndị America Anyị nwere ike ikwu maka ọtụtụ okwu: afọ ojuju, nnwere onwe, ịha nhatanha, amaghị ihe, ịbịa ihe n'oge, ịnọ kpọmkwem, nzuzo na oghere onwe ya yana ụfọdụ omenala metụtara omume na ọha, izute ndị mmadụ, ịpụ n'ụlọ mmanya, nri abalị ma ọ bụ imeta ndị Amerịka enyi.
Dabere na Jehova afọ ojuju Anyị nwere ike ịsị na ọ bụ uru mgbasa ozi na -akwado mgbe niile: onye kere onwe ya. N'arụmụka, ọ bụ eziokwu, n'ihi na onweghị onye na -eme ya naanị ma ewezuga ihe gbara ya gburugburu, mana ogologo oge, nke ahụ bụ echiche a kwadoro. Ihe ọzọ bụ na a na -etinye ọtụtụ ihe bara uru n'oge, egbula ogema ọ bụ na -enweghị isi, yabụ ịghara ikwu maka ịbịa oge maka ọhụhụ. Ya bụ, ịbịa n'oge na -atụ ụjọ nke ukwuu.
Mgbe ha nọ n'akụkụ ndị ọzọ nke ụwa ndị na -eto eto ka na nne na nna ha na -ebi mgbe ha na -agụ akwụkwọ na mahadum, nke a abụghị iwu ebe a. Kpodoro isi ala, gụsịrị akwụkwọ sekọndrị, ndị na -eto eto na -ahapụ ụlọ nne na nna, bụrụ maka ọmụmụ ihe ma ọ bụ ọrụ. Otu kwesịrị nọọrọ onwe ha na nke a na -ahụ dị mma. Echiche ọzọ dị mma metụtara ya ohiha, ụdị ọdịbendị dị iche iche nke mba ahụ mepụtara echiche na ọ bụ mba nwere otu ohere maka mmadụ niile.
Ee, ee, ihe ọzọ na -agbagha mana ọzọkwa ọ bụ echiche etinyere na agụmakwụkwọ na ụlọ mgbasa ozi. Echiche na United States bụ obodo nwere ohere nha anya maka mmadụ niile akwụsịbeghị ịmegharị ya na fim, na TV na ihe ọchị. Agbanyeghị na tiori ọ mara mma nke ukwuu, anyị niile kwesịrị inwe otu ohere n'agbanyeghị agbụrụ, okpukperechi, okike ma ọ bụ ọnọdụ akụ na ụba, eziokwu bụ ihe ọzọ.
N'aka nke ọzọ, n'agbanyeghị na enwere ọdịbendị dị oke mkpa, m na -eche ọha ndị Japan ma ọ bụ Korea, dịka ọmụmaatụ, Omenala ndị America bụ ihe na -ezighi ezi. Ndị mmadụ na -ekwu okwu n'echeghị eche, na -eji ejiji adịghị mma, na -akpọ ndị isi ha aha mbụ, enweghị nsọpụrụ ... N'ozuzu ndị mmadụ na -emeghe ọnụ ma na -ekwu eziokwuỌ na -ekwu ihe ọ na -eche n'echeghị oke ya. Ọ bụ ikwu okwu kpọmkwem na na omenala ndị ọzọ nwere ike na -akpasu iwe ma ọ bụ n'ime ha ka a ga -ewere dị ka mkparị. Kama nke ahụ, mgbe onye mba ọzọ na -agagharị ikwu ma ọ bụ ịrịọ ihe, ndị America na -enwe mgbagwoju anya na ya.
Ọ bụ ezie na ọdịbendị Latin America na-eme enyi, na-emeghe, na-emeghe ọnụ ụzọ, Ndị America na -ahọrọ na enweghị ohere nke ha nwere. Ọ bụrụ na na Latin America nsusu ọnụ na ịmakụ juru eju n'etiti ndị enyi na ọbụna ndị bịara abịa, ọ bụghị ebe a na United States. Ha anaghị amasị nsusu ọnụ ma ọ bụ ndị mmadụ na -akpachi anya mgbe ha na -ekwu okwu. Gburugburu oghere nkeonwe sara mbara karịa n'ọdịbendị ndị ọzọ.
Ọ naghị amasịkwa ha ka a jụọ ha gbasara afọ ndụ ha, ego ole ha na -akpata, ma ọ bụ ka ha tụọ. Isiokwu mkparịta ụka n'etiti ndị mmadụ na -abụghị ndị ikwu ma ọ bụ ndị na -adịghị emekọ ihe anaghị etinyekarị nsogbu ezinụlọ, okpukperechi ma ọ bụ ndọrọ ndọrọ ọchịchị. Yabụ Mmegharị ahụ dị a shouldaa ka m kwesịrị iburu n'uche ma m gaa United States?
Ihu ọma: mgbe niile leenụ anya ibe unu mgbe unu na -akparịta ụka ma ọ bụ na -ama aka (site na nwoke rue nwoke, site na nwanyị ruo nwanyị wee gwakọta), ghara isi ísì Ọ bụ eziokwu na anyị anaghị elebara ịdị ọcha nke onwe anyị anya ma debe anya anyị, mwakpo oghere nkeonwe gị.
A na -ewerekwa ya dị ka nkwanye ugwu ka mmadụ meghee ụzọ, jiri ndidi chere n'ahịrị, iji mesoo ndị na -enye ọrụ enyi na enyi, hapụ ndụmọdụ n'ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ebe niile (ndị na -edozi isi, ebe a na -adọba ụgbọala, ụlọ oriri na ọ hotelsụ, ụ, taxi ...).
Mgbe anyị na onye Amerịka na -eri nri, anyị ga -akwadebe rie nri abalị. N'ime Latin America ndị ọzọ, nri abalị na -eji nwayọ nwayọ mgbe elekere 8 ma ọ bụ 9 n'abalị mana ọ bụghị ebe a, ọ dị na mbụ. Mgbe ị na -eri nri, ị gaghị eme ọsọ ọsọ, ị ga -eji akwa nhicha, ọ bụrụ na ọ bụ n'etiti ndị enyi ihe ọ na -adịkarị bụ na onye ọ bụla na -akwụ ụgwọ nke ya ma ọ bụrụ na ọ bụghị ebe nri ngwa ngwa ị ga -ahapụ a Ntuziaka 15%.
Ndị America na -agagharị agagharị na nnukwu obodo ha. Maka ọrụ, maka ọmụmụ ihe, ha na -agagharị nke ukwuu ugboro ugboro karịa onye ọ bụla n'ime anyị. Yabụ, ọ na -abụkarị ndị mmadụ ịdị mma na inwe mmasị isoro ndị ha na -amaghị, ndị na -achọ ịmata ihe akparịta ụka. N'otu oge ahụ, a na -ekwukarị na ihe ndị a bụ ihe kpatara na ndị America anaghị enwekarị ndị enyi maka ndụ, n'ihi oke mmụta ma ọ bụ mgbanwe ọmụmụ n'ụlọ akwụkwọ.
Iburu okwu ndị a niile n'uche nwere ike inyere anyị aka ime mgbanwe n'oge anyị nọ na United States. Karịa ma ọ bụrụ na anyị nọrọ ogologo oge, na -amụ ihe ma ọ bụ na -arụ ọrụ. A na -ekwukarị ya na kọntaktị omenala enwere ọtụtụ ihe: otu n'ime Mmanụ aeyụ ebe ihe niile dị mma ma na -atọ ụtọ na omenala ọhụrụ dị oke mma; ihe atụ ọzọ ujo omenala ebe nsogbu nke mbụ bidoro n'ịzụ ahịa, ụlọ, njem, asụsụ ... nke a niile na -ebute ike ọgwụgwụ nke uche.
Oge ọzọ na kọntaktị omenala a bụ nke ntọala mbụ. Ka ọ dị ugbu a, a na -amalite idozi nsogbu ndị gara aga ma mmadụ amala ụgbọ ala ọ ga -ewe, otu esi akwụ ụgwọ maka nke a na nke ahụ. Ikekwe asụsụ ahụ adịchabeghị mfe, mana ihe ndị bụ isi na -amalite ịnọgide na diski ike nke ụbụrụ. Ọ na -esote oge siri ike nke iche echiche ebe ịdị anya na -amalite itule ya na ezinụlọ na ndị enyi yana ndụ nwa ụbọchị na mgbe ahụ owu ọmụma na -agbada.
N'ikpeazụ, ọ bụrụ na oge ahụ abịa, n'ikpeazụ enwere oge nke nnabata na mwekota ebe a nabatala usoro zuru oke, omume na omenala, nri, wdg. Anyị na -amalite nwekwuo ahụ iru ala. Oge okirikiri a bụ ihe nkịtị na onye ọ bụla kwagara mba ọzọ na -agakarị.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ Njem » America » United States » Omenala ndị America
Kedu mba kacha ochie na Europe